Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » India na -agbasa ozi ọma » Singapore na India nwetara nkwekọrịta ọhụrụ na ụgbọ elu
Airlines • Aviation • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • India na -agbasa ozi ọma • News • Iwughachi • Akụkọ na -agbasa na Singapore • Tourism • Transportation • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem
Ụgbọ elu Singapore India ọhụrụ
N'ikwu okwu banyere ịmaliteghachi ụgbọ elu dị n'etiti India na Singapore site na Nọvemba 29 n'okpuru Vaccinated Travel Lane (VTL), Jyoti Mayal, Onye isi ala, Association of Travel Agents Association of India (TAAI), gbakwunyere mmasị na ekele ya na Civil Aviation Authority nke Singapore. (CAAS) na Ministry of Civil Aviation nke India na ịmaliteghachi ụgbọ elu azụmahịa ahaziri n'etiti mba abụọ a.
VTL nke Singapore na India ga-amalite na ụgbọ elu isii ahọpụtara kwa ụbọchị site na Chennai, Delhi na Mumbai. Ngwa maka ngafe njem ịgba ọgwụ mgbochi maka obere oge na ndị nwere ngafe ogologo oge si India ga-amalite site na Nọvemba 29. “Ime ụdị ntinye ahụ. oge mgbasa nke Covid bụ n'ezie mmegharị nkwuwa okwu nke na-agaghị eme ka mmekọrịta dị n'etiti mba abụọ ahụ sikwuo ike kama ọ ga-arụkwa ọrụ dịka mmụgharị nke ngalaba njem nlegharị anya. Enwere m mmetụta siri ike na a chọkwuru ụgbọ elu azụmahịa iji tụte n'ime njem nleta na India,” ka o kwukwara.
Ụgbọ elu nwekwara ike ịrụ ụgbọ elu na-abụghị VTL n'etiti mba abụọ a, n'agbanyeghị na ndị njem na ụgbọ elu ndị na-abụghị VTL ga-edobere ihe achọrọ ahụike ọha na eze. "Anyị na TAAI na-enwe mkparịta ụka mgbe niile na Ministry of Civil Aviation, Gọọmentị India. Mmeghe nke mbara igwe maka ụzọ ndị njem azụmahịa mba ụwa na-egosipụta nchegbu anyị maka ịdị mfe nke ịzụ ahịa, "Jay Bhatia, osote onye isi ala, TAAI kwuru.
N'ịbụ ndị na-eme mgbalị dị mma, TAAI Southern Region na mkpakọrịta na Singapore Tourism Board (STB) haziri webinar njem na mbido afọ a na July nke hụrụ nnukwu òkè. “Mkpebi ndị dị otú ahụ na-arụpụta ihe na-anabata mgbe niile site na ngalaba njem na ndị otu njem n'ihi na akụkụ dị mma nke akụ na ụba dabere na njem na njem nlegharị anya. Akụ na ụba n'ebe niile chọrọ ezigbo mmụghachi karịsịa mgbe ọgbaghara Covid gasịrị, "Bettaiah Lokesh, onye odeakwụkwọ ukwu Hon. TAAI kwuru.
Shreeram Patel, Hon Treasurer, TAAI kwuru, "A ka na-anabata ndị ọrụ njem dị ka otu nkwụsị nkwụsị maka ndị ahịa, na-eduzi na ọkachamara na-ejikwa akụkụ niile nke njem ụlọ na / ma ọ bụ nke mba ụwa, nke gụnyere ugbu a ịgbaso iwu Covid maka ịpụ na ịbịarute ebe." dịka ọ gbakwasara ndị ọchịchị obodo abụọ ahụ ekele ya.
Mkpebi nde $ 44: Hilton hụrụ na ọ naghị elebara anya n'ihe gbasara mwakpo mmekọahụ